ICJ oo mar kale dib u dhigtay Dacwadda Badda ee Kenya iyo Somalia | Berberanews.com
Home WARARKA ICJ oo mar kale dib u dhigtay Dacwadda Badda ee Kenya iyo...
ICJ oo mar kale dib u dhigtay Dacwadda Badda ee Kenya iyo Somalia
Dacwadda ayaa hadda lagu wadaa in ay maxkamadda dhegeysigeeda billowdo 8-da ilaa 12-ka Juun ee sanadka dambe.
Kenya ayaa ku doodeysa in maxkamaddani aysan ahayn in ay dhageysato dacwaddani maadaama bey tiri aysan xallin karin arrimaha siyaasadeed ee ku lifaaqan dacwaddan.
Taa badalkeedana waxa ay dhawaan Midowga Afrika ka codsatay in uu dhexdhexaadiyo iyada iyo Soomaaliya oo murankani lagu dhameeyo wadahadal, haseyeeshee dowladda Soomaaliya ayaa arrintaasi ku gacanseyrtay.
Wasiiru-dowlaha Arrimaha Dibadda ee Dowladda Federaalka Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Khayr ayaa kulanka guddiga amniga ee Midowga Afrika oo ka dhacay magaalada Addis Ababa ka sheegay in Soomaaliya ay ku kalsoon tahay in dacwaddani lagu dhammeeyo Maxkamadda Caddaaladda Adduunka oo ay haatan hor taallo.
Dacwaddan la xiriirta muranka dhanka xuduudda badda ayaa soo jiitameysay in ka badan 10 sano, balse dowladdii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bishii July ee 2019-kii, maxkamadda ICJ geysay kiis ka dhan ahaa Kenya oo dooneysa in wadahadal lagu dhammeeyo khilaafka.
Previous articleGuddoomiyaha Maxkamadda Sare oo isku shaandhayn ku sameeyay Garsoorayaasha
Next article“Habar-Yoonis iyadaa guulaysatay… haddii Xukuumadda Somaliland inta hadhsan kaga baxdo, annagaaba Jabhadda ku biiri…” Siyaasi ka hadlay Shuruudihii Madaxweynaha ee Ergadii Korneyl Caarre